🍒फास्टपे क्यासिनो - आधिकारिक साइट, दर्ता, बोनस २०२१
फास्टपे कम्पनीको बारेमा
FastPay Casino >फास्टपे अनलाइन क्यासिनो - एकै ठाउँमा उत्तम स्लटहरू र छिटो पेआउटहरू
फास्टपे अनलाइन क्यासिनो - एकै ठाउँमा उत्तम स्लटहरू र छिटो पेआउटहरू
फास्टपे आधिकारिक वेबसाइट समीक्षा
फास्टपे केसिनोमा वित्तीय लेनदेन
फास्टपेमामा स्लट मेसिनहरूको विविधता
बोनस र फास्टपे ग्राहकहरूको लागि प्रचार प्रस्ताव
अनलाइन क्यासिनो फास्टपे एक जवान जुवा परियोजना हो जुन दामा एन.भी. धेरै प्रख्यात क्यासिनो उनको व्यवस्थापन अन्तर्गत संचालन। फास्टपेको कुराकाओ गेमि Commission आयोगले जारी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय इजाजतपत्र छ। अनलाइन क्यासिनो ईमानदारीको लागि नियमित रूपमा जाँच गरिन्छ र विशेष लाइसेंस प्राप्त स्लट मेसिनहरू प्रयोग गर्दछ। परियोजना गुणवत्ता सेवा र छिटो भुक्तानमा केन्द्रित छ।
क्यासिनोको मुख्य साइट COM डोमेन क्षेत्रमा अवस्थित छ। केही देशहरूलाई स्थानीय इजाजत पत्र प्राप्त गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जुवा परियोजनाहरू आवश्यक पर्दछ, अन्यथा उनीहरूका साइटहरू ब्लक गरिएका छन्। त्यस्ता प्रतिबन्धहरूलाई बाइपास गर्न, त्यहाँ फास्टपे दर्पण छ - यो अतिरिक्त साइट हो जुन कार्यक्षमता र इन्टरफेसमा मुख्य एक भन्दा भिन्न हुँदैन। केवल भिन्नता डोमेन हो।
फास्टपे साइट अँध्यारो रंगमा बनाइएको छ। केवल बटनहरू र खेलहरूको उज्ज्वल डिजाइन हुन्छ। शीर्ष मेनू ट्याबहरू द्वारा प्रतिनिधित्व गर्दछ:
"हाम्रो बारेमा" - क्यासिनोको बारेमा जानकारी समावेश गर्दछ;
"समर्थन" - तपाईंलाई समर्थन सेवामा अनुरोध छोड्न अनुमति दिन्छ;
"भुक्तानी" - समर्थित भुक्तान प्रणाली, निक्षेप र निकासी सीमा यहाँ संकेत गरीन्छ;
"प्रोमो" - सेक्सन हालको पदोन्नतीहरू, बोनसहरू, उनीहरूको रसिदको लागि सर्तहरूको बारेमा जानकारी प्रस्तुत गरिन्छ;
"टूर्नामेन्टहरू" - क्यासिनोले नियमित रूपमा यसको ग्राहकहरू बीच टूर्नामेन्ट राख्छ, सेक्सनमा तपाईले हालको र भविष्यका टूर्नामेंटहरूको बारेमा जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ।
शीर्षमा त्यहाँ एक लगइन फारम पनि छ, दर्ता विन्डो खोल्न बटन। माथीको दायाँ कुनामा भाषा छान्ने बटन छ। इन्टरफेस रूसी, अंग्रेजी, जर्मन, यूक्रेनी, पोलिस, फिनिश, स्पेनिश, चेक, जापानी, मलय, फ्रेन्च, नार्वे, टर्कीमा अनुवाद गरिएको छ।
एक जानकारी ब्यानर मुख्य पृष्ठ को एक महत्वपूर्ण हिस्सा कब्जा। यहाँ प्रचार प्रचार, क्यासिनो को काम को बारे मा आधारभूत जानकारी प्रकाशित छन्।
ब्यानर अन्तर्गत क्यासिनोको मुख्य सेक्सनहरूमा लिंकहरू छन्, त्यहाँ स्लट मेसिनहरू र अन्य खेलहरूको साथ खेल लॉबी छ। सबै स्लटहरू नि: शुल्क मोडमा परीक्षण गर्न सकिन्छ - कुनै पञ्जीकरण आवश्यक छैन।
फास्टपे केसिनो वेबसाइटको तल एक सन्दर्भ मेनू छ, कानूनी जानकारीको साथ सेक्सनहरूमा लि links्क। यो दर्ता गर्नु अघि नियम र सर्तहरूको अध्ययन गर्न अनिवार्य छ।
मोबाइल उपकरणबाट साइट भ्रमण गर्दा, इन्टरफेस स्वचालित रूपमा स्क्रीन आकारमा अनुकूलन। यसले तपाईंलाई ट्याब्लेटबाट अधिक मनपर्ने आरामको साथ तपाईंको मनपर्ने जुवा खेलहरू खेल्न अनुमति दिँदछ।
फास्टपे अनलाइन क्यासिनो 24/7 ग्राहक समर्थन प्रदान गर्दछ। तपाई दिनको कुनै पनि समय मद्दतको लागि सोध्न सक्नुहुन्छ। प्राविधिक समर्थन पंजीकरण, खाता पुनःपूर्ति, आदि मा मद्दत गर्दछ।
क्यासिनोले धेरै संचार च्यानलहरू प्रदान गरेको छ:
अनलाइन कुराकानी - सम्बन्धित मेनू बटन मार्फत बोलाइएको, यो साइटको तल्लो दाहिने कुनामा अवस्थित छ;
टिकट - तपाई माथी मेनूको"समर्थन" बटन मार्फत टिकट सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ;
इ-मेल - तपाईले क्यासिनो वेबसाइटमा देखाईएको सम्पर्कहरूमा मात्र अपील पठाउनु पर्छ।
समर्थन सेवामा सम्पर्क गर्नु अघि, FAQ खण्डमा जानको लागि सिफारिश गरिन्छ। यहाँ पहिले नै लोकप्रिय प्रश्नहरुको जवाफ तयार छन्।
साइट आगंतुकहरु आधिकारिक साइट र यसको मुख्य कार्यात्मक ब्लक को सुविधाजनक स्थान को सुखद वातावरण नोट। उज्यालो ब्यानरहरूले एक अर्कालाई प्रतिस्थापन गर्दछन्, पाहुनाहरू र फास्टपेस क्यासिनो क्लबका सबै आवश्यक जानकारीहरू दर्ता गर्ने सदस्यहरूको साथसाथै यसको भर्चुअल भित्तामा के भइरहेको छ भन्ने कुरामा रुचि जगाउँदछ।
मुख्य पृष्ठले रेजिष्ट्रेसन बटनहरू, लगइन बटनहरू र मेनू ट्याबहरू समावेश गर्दछ। तार्किक रूपमा समूहबद्ध ईन्टरफेसले शुरुआतका लागि नेभिगेट गर्न सजिलो बनाउँछ। विभिन्न देशका जुवाडेहरूले यसको पृष्ठहरूमा सहज महसुस गर्नेछन्, किनभने यो विभिन्न भाषाहरूको ठूलो संख्याको लागि अनुकूलित गरिएको छ:
स्पेनिश, स्विडेनी, नर्वे, नर्वे, फिनिश, मलाय, कजाख, टर्की, फ्रान्सेली, चेक, जापानी र अन्य धेरै कम प्रासंगिक छैनन्।
शैली आधिकारिक साइट फास्ट्रे को चहकिलो र colors्गले छुट्याएको छ, त्यसैले यो चियर्स। अनावश्यक जानकारीको अभाव र रमाईलो डिजाइनले तपाईंलाई दैनिक समस्याहरूबाट छिटै उम्कन मद्दत पुर्‍याउँछ, जुवा मनोरन्जनको एक विशाल विविधतामा हेडलांग।
क्यासिनोले जित्नेहरू जम्मा गर्ने र फिर्ता लिन धेरै तरिकाहरू प्रदान गर्दछ। फास्टपेले मुद्राको विस्तृत श्रृंखलाका साथ काम गर्दछ, क्रिप्टोकरन्सीज सहित - EUR, NOK, CAD, AUD, NZD, PLN, JPY, ZAR, USD, BTC, BCH, ETH, DOGE, LTC। प्रत्येक नयाँ ग्राहकले दर्ताको समयमा खाताको आधार मुद्रा चयन गर्नुपर्नेछ। यदि पछिको निक्षेपहरू फरक मुद्रामा गरिन्छ भने स्वचालित रूपान्तरण गरिन्छ।
फास्टपेमा प्राय: जम्मा वेबमनी इलेक्ट्रोनिक वालेटको अपवाद बाहेक, कमीशन बिना क्रेडिट गरिन्छ। Cases०% भन्दा बढि केसहरूमा, खातामा तुरून्त पैसा पठाइन्छ - तुरुन्तै खेलाडीलाई श्रेय दिईन्छ शर्त राख्न सकिन्छ।
खेल खाता जम्मा गर्ने विधि:
बैंक कार्ड - भिसा, मास्ट्रो, मास्टरकार्ड;
e-वालेटहरू - EcoPayz, Neteller;
वाउचरहरू - इकोवाचर आदि
कुलमा, क्यासिनोले १ 18 जम्मा विकल्पहरू प्रदान गर्दछ। पुनःपूर्तीकरणका लागि सीमितता वफादारीले छुट्याईन्छ, उनीहरूले तपाईंलाई सानो बजेटको साथ पनि खेल्न अनुमति दिन्छ - १० अमेरिकी डलर, १० EUR, ००5 BCH, 00 44०० DOGE, ०.०२25 ETH, ०.००१ BTC, ००२ LTC, १०२ NOK, १ C CAD, १ AU AUD, १ N NZD, PLN, 45, JPY १२8585, ZAR १55।
फिर्ताका लागि भुक्तान प्रणालीहरूको सूची जम्मा विकल्पहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ। रकम र भुक्तानी प्रणालीमा निर्भर गर्दै, भुक्तानी १२-72२ घण्टा भित्र गरिन्छ। न्यूनतम निकासी सीमा निक्षेप रकम भन्दा २ गुणा बढी हुन्छ।
खाताबाट रकम फिर्ता लिन, तपाईले सबै बोनस सर्तहरू पूरा गर्नु पर्छ (यदि खेलाडी पदोन्नतिमा भाग लिन्छ भने), प्रमाणिकरण प्रक्रियामा जानुहोस्।
फास्टपे जुवा सूची हरेक स्वाद को लागी २ हजार भन्दा बढी खेल प्रदान गर्दछ। साइटसँग than० भन्दा बढी प्रदायकहरूबाट स्लटहरू र राउलेटहरू छन्:
एमाटिक, नेटएन्ट, फन्टास्मा;
प्लेसोन, रिलक्स, आईग्राफ्ट, माइक्रोगिमिंग, आदि।
क्यासिनो नयाँ स्लटमा विशेषज्ञता - पुरानो ग्राफिक्सको साथ कुनै रेट्रो मेशिनहरू। क्याटलगमा and र els रीलहरू, or वा अधिक भुक्तान लाइनसहित स्लट मेसिनहरू छन्। प्रत्येक स्लटको आफ्नै थिम हुन्छ, जुन डिजाइन, खेल तत्वहरू, साउन्डट्र्याकमा समर्पित हुन्छ।
सेक्सन"खरीद फिचर" र"Bitcoin, ETH, LTC" विशेष ध्यान पाउन योग्य छ। पहिलो खण्डमा स्लट मेशिनहरू हुन्छन् जहाँ तपाईं बोनस राउन्डहरू किन्न सक्नुहुन्छ, दोस्रो सेक्सन स्लट प्रस्तुत गर्दछ क्रिप्टोकरन्सीको रूपमा बाजीको साथ। फास्टपेमा केहि मेशिनहरूमा ज्याकपॉटहरू छन्।
क्यासिनोले विभिन्न प्रकारका रूलेटहरू प्रदान गर्दछ - अमेरिकी, नर्वे, नर्वे, अटो रूलेट, आदि। खेलको यो समूह प्रदायक इभोलुसनद्वारा प्रतिनिधित्व गर्दछ। प्लेयरले व्यक्तिगत प्राथमिकता र सीमाहरूको आधारमा उपयुक्त टेबल छनौट गर्न सक्दछ।
क्यासिनो बोनस कार्यक्रम निम्न प्रस्तावहरूले प्रतिनिधित्व गर्दछ:
नयाँ ग्राहकहरूको लागि बोनस। ती फास्टपे मा पहिलो र दोस्रो निक्षेप जम्मा छन्। पहिलो निक्षेपमा, खेलाडीले बोनस कोष र निःशुल्क स्पिनहरू प्राप्त गर्दछ, दोस्रोमा - केवल बोनस पैसा। बोनसको सहि रकम जम्मा को आकार द्वारा निर्धारित गरिन्छ। पहिलो बोनसको अधिकतम रकम 86565 एनओआर, १०० अमेरिकी डलर/ईयूआर, ०.० बीसीएच, १. L एलटीसी, 000 44००० डोगे, १२7 सीएडी, १ 130० एडीडी, ०.०१ बीटीसी, १11११ कार, ०२5 ईटीएच, १०670० जेपीवाई,4374 पीएलएन ... दोस्रोको आकार २ गुणा सानो छ। तपाईं मात्र एक पटक स्वागत प्रस्ताव प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
वफादारी प्रणाली। स्तरहरू समावेश गर्दछ - प्रत्येक प्राप्त गर्नका लागि तपाईंलाई स्थिति पोइन्टहरू संकलन गर्न आवश्यक पर्दछ। तिनीहरू स्लट मेसिन र अन्य खेलहरूमा बेट्सको लागि जम्मा हुन्छन्। वफादारी प्रणाली उपलब्ध बोनस को संख्या को लागी असर गर्छ। नयाँ तहमा पुग्नको लागि, खेलाडीले १ to देखि free०० निःशुल्क स्पिनहरू पाउँछ।
फास्टपे एक रमाईलो परियोजना हो जुन सबै जुवा प्रशंसकहरूले विचार गर्नुपर्दछ। क्यासिनोले तपाईंलाई रमाईलो समयको लागि आवश्यक सबै चीजहरू प्रदान गर्दछ, जुवाको संसारमा विसर्जन गर्नुहोस्। खेलाडीहरूले उच्च-स्तरको जुवा मनोरन्जन, छिटो भुक्तानी, सुविधाजनक वेबसाइट, ठूलो संख्यामा बोनस र लाभदायक वफादारी कार्यक्रमको अपेक्षा गर्छन्। एक मात्र शर्त केवल वयस्कहरूले साइटमा दर्ता गर्न सक्दछन्।